Nepal Mamila | ‘पारस युग’पछि कसले सम्हाल्ला ब्याटिङक्रमको तेस्रो स्थान? - Nepal Mamila ‘पारस युग’पछि कसले सम्हाल्ला ब्याटिङक्रमको तेस्रो स्थान? - Nepal Mamila
‘पारस युग’पछि कसले सम्हाल्ला ब्याटिङक्रमको तेस्रो स्थान?
काठमाडौं- पारस खड्काका नाममा नेपाली क्रिकेटमा बग्रेल्ती कीर्तिमान छन्। त्यही कारण सन्यासपछि नेपाली क्रिकेटले उनलाई ‘मिस’ गर्नेछ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ अब नेपाली क्रिकेटमा उनको स्थान कसले लिन सक्छ भन्ने प्रश्न छ।
उनी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मा नेपालका तर्फबाट सबैभन्दा बढी रन बनाउने खेलाडी हुन्। १० ओडीआईमा उनले ३१५ रन बनाएका छन्।
पहिलो १० ओडीआईमा ३०० रन कटाउने उनी एक्ला ब्याट्स्म्यान हुन्। ओडीआईमा शतक हान्ने पनि उनी एक्ला ब्याट्स्म्यान हुन्। उनको नाममा ओडीआईमा एक शतक र एक अर्धशतक छन्। डेब्युमा सबैभन्दा धेरै चार विकेट लिने बलरको कीर्तिमान पनि उनकै नाममा छ।
नेपालले अहिलेसम्म खेलेका सबै १० ओडीआईमा उनी संलग्न थिए। अघिल्ला ६ ओडीआईको कप्तानी गरे। र, अर्को प्रमुख विषय– उनले नौ वटा ओडीआईमा मध्यक्रममा ब्याटिङ गरेका थिए। केही खेलमा त उनी एक्लैको प्रदर्शनको भरमा नेपालले जित हासिल गरेको छ।
पारसले १० ओडीआई खेल्दा आठ पटक तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका छन्। एक पटक ओपनिङमा र एक पटक चौँथो नम्बरमा खेलेका छन्। उनले युएईविरुद्ध दुबईमा २८ जनवरी २०१९ मा भएको खेलमा पनि तेस्रो नम्बरमा नै ब्याटिङ गरेर शतक बनाएका थिए।
ओपनिङमा भने उनी जमेनन्। विश्व क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत ५ फेब्रुअरी २०२० मा कीर्तिपुरमा नै भएको खेलमा उनी ज्ञानेन्द्र मल्लसँग ओपनिङमा आएका थिए। तर, उनले १४ बलमा ३ रन मात्र बनाउन सके। १९८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल पारस र ज्ञानेन्द्र चाँडै बाहिरिँदा १७९ रनमै समेटिएको थियो। ज्ञानेन्द्रले पनि २ रन मात्र बनाएका थिए।
पारस कतिसम्म महत्वपूर्ण खेलाडी थिए भने उनी बाहिरिँदा पूरा टिम मनोवैज्ञानिक दबाबमा पर्ने गर्थ्यो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वसदस्य सन्जम रेग्मी तेस्रो स्थानको ब्याट्स्म्यान अनुभवी हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘वान डाउन आउने ब्याट्स्म्यान दबाब थाम्न सक्ने र रन पनि बनाउन सक्ने हुनुपर्छ। भारतमा राहुल द्रविड, सचिन तेन्दुलकर, सौरभ गांगुलीले वान डाउन ब्याटिङ गरेको हामीले देखेका हौँ, पर्याप्त अनुभव नभएका खेलाडीलाई वान डाउन पठाउन मिल्दैन,’ सन्जम भन्छन्।
पारसले एउटा ओडीआईमा चौँथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्दा भने अर्धशतक बनाएका थिए। ३ अगष्ट २०१८ मा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध भएको खेलमा उनले ६९ बलमा ५१ रन बनाएका थिए। उनको यो पहिलो अर्धशतक थियो र नेपालले पनि ओडीआईमा पहिलो जित दर्ता गरेको थियो।
उनले अन्य खेलाडीसँग गरेको साझेदारीले पनि मध्यक्रममा उनको महत्व कति थियो भन्ने देखाउँछ। युएईविरुद्ध दुबईमा २८ जनवरी २०१९ मा भएको खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्लसँगको ६२ रनको साझेदारी दोस्रो विकेटका लागि नेपालको अहिलेसम्मको उच्च हो। त्यही खेलमा पारस र रोहितकुमार पौडेलबीच भएको ५४ रनको साझेदारी पनि पाँचौँ विकेटका लागि अहिलेसम्मको उच्च हो।
आज पपुवा न्युगिनीसँगको खेल पारसविनाको नेपालको पहिलो ओडीआई हुनेछ। १० मध्ये आठपटक तेस्रो स्थानमा ब्याटिङ गरेका पारसको स्थान अब कसले लिन सक्छ?
तेस्रो स्थानमा ज्ञानेन्द्र, शरद कि आरिफ?
पारस टिममा हुँदा उनले तेस्रो स्थान छोडेको दुई खेलमा एक–एक पटक शरद भेषवाकर र अनिल साहले ब्याटिङ गरेका थिए। ओमानविरुद्ध २०० रनभन्दा कमको योगफल पछ्याएको अवस्थामा शरदले तेस्रो नम्बरमा आएर अर्धशतक बनाएका थिए। तर, उनले सुस्त गतिमा ब्याटिङ गर्दा नेपाल विजयी हुन सकेन। उनले १०८ बलमा ५५ रन बनाएका थिए।
त्यस्तै नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध भएको खेलमा अनिल साह क्रिजमा टिक्नै सकेनन्। उनले ३ बलमा एक चौकाको मद्दतमा ४ रन मात्र बनाउन सके। यद्यपि, उक्त खेलमा पारस र सोमपालको अर्धशतकको मद्दतमा नेपाल विजयी भएको थियो। अनिल अहिले राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिसकेका छन्।
इङ्ग्ल्यान्डसँगको चौथो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो पारीमा भारत १ सय ९१ रनमा अलआउट
चेल्सी र लिभरपुल बराबरीमा रोकिए